italian cameo jewelry hand carved rings - international currency
italian cameo jewelry hand carved rings
Cameo Jewelry - Antique Cameos
ရီနော့ဆင့်ခေတ် အာဖရိကဘုရင်ပုံ ကမီယို ၁၆ ရာစုCameo, handmade shell (Cassis madascarensis) , Modula Gioielli.လူတို့ အဆင်အယင်တန်ဆာအဖြစ် အသုံးပြုကြသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွင် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ ကိုးကွယ်ရာ အထိမ်းအမှတ်ပြုရာ ရုပ်ပုံများကို အကြွထွင်းထု ထားသော ကျောက်မျက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်လေသည်။ ထိုကျောက်မျက်များကို 'ကမီယို'ဟု ခေါ်၍ အချိုင့်ထွင်း ကျောက်မျက်များကို 'အင်တဲလယို'ဟု ခေါ်သည်။ ကမီယိုပန်းပြောက်ကိုသုံးသော အလေ့အထသည် လူတို့တွင် ရှေးအခါမှစ၍ ရှိခဲ့၏။ ရှေးက ကျောက်မျက် များတွင်သာမကယောက်သွားခွံများ၊ ခရုခွံများ၊ ကနုကမာများပေါ်တွင်လည်း ပုံကြွများဖေါ်၍ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ကျောက်မျက်များကို ပုံကြွ များဖေါ်ရာတွင် အရောင်နှစ်မျိုးသုံးမျိုး ထပ်လျက်ရှိသောကျောက်မျက်များသည် အလွန်ကောင်း၏။ အပေါ်ယံအရောင် တွင် လိုရာပုံစံကို ထုလုပ်၍ မလိုသောအပိုင်းကို ထွင်းပစ် လိုက်သောအခါ အောက်ထပ်ရှိအရောင်သည် နောက်ခံကား သဖွယ် ဖြစ်နေပေသည်။ အရောင်တစ်မျိုးတည်း ရှိသောကျောက်မျက်များပေါ်တွင် ပြုပြင် ဖန်တီးထားသော ကမီယို ပန်းပြောက်သည် ရောင်ကွဲကျောက်မျက် များမှာကဲ့သို့ မလှပချေ။ ရှေးဟောင်းဆူမာလူမျိုးတို့၏ ခေတ်မှ ရောမနိုင်ငံတော်ကြီး ယိမ်းယိုင်ပြိုကွဲချိန်အထိ ကမီယိုပန်းပြောက် များသည် များစွာခေတ်စားခဲ့သည်။ ထိုနောက် အတတ်ပညာ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခေတ်ဖြစ်သော ခေတ်ဆန်းချိန်မှယနေ့တိုင်အောင် ကမီယို ပန်းပြောက်ကို အသုံးပြုလာကြသည်။ ကမီယိုပန်းပြောက်အတတ်မှာ ပန်းပု ရုပ်လုံးထွင်းခြင်း အတတ်၌ အကျုံးဝင်သော်လည်း သေးငယ်သော ကျောက်မျက်တို့ အပေါ်တွင် အလွန်နုနယ်စွာ ပုံဖေါ်ယူရသဖြင့် သီးသန့် အနုပညာရပ်ဖြစ်ပေသည်။ နည်းပညာ[ပြင်ဆင်ရန်]ရှေးခေတ်နှင့် ရီနေဆန်းခေတ်ကာလက ကမီယိုများကို အလတ်စား ကျောက်မျက်များဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး၊အထူးသဖြင့် အရောင် နှစ်ရောင် စပ်နေသော ကျောက်မျက်တုံး၊ မဟူရာကျောက်(onyx)၊ သင်္ဘောမဟူရာ (‌agate) စသော ကျောက်များဖြင့် ထုလုပ်သည်။ ယင်းတို့သည် အမာခံ ကမီယိုများ ဖြစ်သည်။ ဈေးပိုပေါသော ခေတ်သစ်လက်ရာများတွင် ခရုခွံနှင့် ဖန်သားများဖြင့် အတွေ့ရများသည်။ ကျော်ကြားသော ပို့တလန်း ပန်းအိုး (Portland Vase) ကဲ့သို့သော ဖန်သားကမီယို ခွက်များကို ရောမလူမျိုးများက ပြုလုပ်သည်။ ခေတ်သစ်ကမီယိုများသည် နောက်ခံကွဲပြားသော အရောင်ပေါ်၌ ပုံတူကဲ့သို့သော ထွင်းထုပြီး အရုပ်ကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ကမီယို (Assembled cameo) ဟု ခေါ်သည်။ အမှန်မှာ ကမီယို တချပ်ကို ရိုးရာနည်းဖြင့် ထွင်းထုနိုင်သော်လည်း အလွန်ခက်၊ အလွန်လက်ဝင်လေသည်။ တိုက်ရိုက်နည်းဖြင့် အလွှာမတူ အရောင်မတူသော မဟူရာကျောက်ပေါ်၌ လိုအပ်သော ရုပ်လုံးပေါ်အောင် လက်ဖြင့် ထွင်းထုခြင်းသည် သာ၍ ခက်သေးသည်။ တခါတရံ ဆိုးဆေးများဖြင့် ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် မွမ်းမံတတ်ကြသည်။ ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]↑မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁)↑Ting Morris (1 August 2006). Arts and Crafts of Ancient Rome. Black Rabbit Books, 26. ISBN 978-1-58340-913-8။
MenuENGAGEMENT RINGSVintage & Antique Engagement Rings (View All)Diamond Engagement Rings –Sapphire Engagement Rings –Demantoid Engagement Rings –Emerald Engagement Rings –Ruby Engagement Rings –Art Deco Engagement Rings –CloseANTIQUE & VINTAGE JEWELRYRings For Men & Women –Earrings –Necklaces & Pendants –Lockets –Bracelets –Brooches & Pins –Faberge Eggs & Other Egg Pendants –Cross Pendants –Cufflinks –Gentleman’s JewelryView All Jewelry –CloseDemantoid Jewelry –Antiques –New Arrivals –PERIODS & STYLESpre-1700 Jewelry –Georgian Jewelry 1700s – early 1800s –Victorian Jewelry 1840s – c.1900 –Edwardian Jewelry 1901-1910 –Art Nouveau Jewelry 1890s – early 1900s –Art Deco Jewelry 1910s – 1930s –Mid-Century 1940s-1960s –Contemporary Jewelry –CloseSearch
SHELLCAMEOSPAGE 1FREE US SHIPPING THIS MONTH ON ITEMS OVER 100.00HAVE A LOVE ONE?DO NOT KNOW WHAT TO GIVE?GIVE A GIFT CERTIFICATE!GEORGIAN-VICTORIAN-EDWARDIAN-MASTER CARVEDAND VINTAGE SHELL CAMEOS THIS PAGE2 OTHER PAGES OF CAMEOS JUSTCLICK BELOWPAGE 2CLICK- CAMEO BRACELETS , RINGS,EARRINGS****PAGE3CLICK- MISC-STONE-LAVA-CORAL-WEDGWOOD****MAKE SURE YOU CHECK OUT MY NON- SHELL CAMEO PAGEIfyou have bookmarked this page; please refresh it to see new items!I DO HAVE A LAY A WAY PLAN OF3 OR4PAYMENTS DEPENDING ON PRICEIF YOU NEED LONGER PLEASE ASK!I CAN SHIP TO CANADA PRIORITY UP TO 675.00UK 650FRANCE 650JAPAN 5000AUSTRALIA 3644ASK ON OTHERSCLICK ON THE SMALL PICTURE FORA LARGER PICTUREPLEASE NOTE ALL THE MEASUREMENTSINCLUDE THE FRAMES ALSOWHEN I SAY HELD TO LIGHT I HOLD A FLASHLIGHT BEHIND THE CAMEOITEM $1800 AND MORE END OF PAGE= MOST OF THESE ARE FROM MY OWN COLLECTION
Jump to navigationJump to searchFileFile historyFile usageGlobal file usageMetadataSize of this preview: 420 × 599 pixels. Other resolutions: 168 × 240 pixels| 336 × 480 pixels| 420 × 600 pixels| 538 × 768 pixels| 717 × 1,024 pixels| 2,608 × 3,722 pixels.Original file‎(2,608 × 3,722 pixels, file size: 9.79 MB, MIME type: image/jpeg) This isafile from the Wikimedia Commons. Information from its description page thereis shown below. Commons isafreely licensed media file repository. You can help.
Men's Watch, Excellent/Like New - jewelry - by owner
QR Code Link to This Post A Bill Blass men's stainless steel watch with steel bracelet, in small size - forasmall men's or teen/young-adult wrist. Stainless steel round case. Condition is excellent/like new.Just $50, far less than what you'll pay forasimilar new watch. Cash, PayPal or Venmo accepted. Thanks for looking.* note -watch does not come with case in photos.do NOT contact me with unsolicited services or offerspost id: 6860621736 posted: 2019-04-07 17:13 updated: 2019-04-15 06:26
The history of jewelry designThe possibility of tracing jewelry’s historic itinerary derives primarily from the custom, beginning with the most remote civilizations, of burying the dead with their richest garments and ornaments. Plastic and pictorial iconography—painting, sculpture, mosaic—also offer abundant testimony to the jewelry worn in various eras.
[04/15]italian cameo jewelry hand carved wood
[04/15]italian cameo jewelry hand carved signs
[04/15]italian cameo jewelry hand carved patterns
[04/15]italian cameo jewelry hand carved furniture
[04/15]italian cameo jewelry hand carved designs